Indlela Yokuthanda Uthixo Ngentliziyo Yakho Yonke | Okufundiswa YiBhayibhile
Sinokuqhubeka njani simthanda uThixo?
UYehova uya kubavuza njani abo baqhubeka bemthanda?
Ngaba uza kumenza uYehova ikhusi lakho ebudeni bala maxesha ezaqhwithi?
1, 2. Sinokuyifumana phi indawo ekhuselekileyo esinokusabela kuyo namhlanje?
KHAWUZITHELEKELELE uhamba endleleni ngemini enesiphango. Kuqalisa ukusibekela. Emva koko kulenyeza imibane, kugqekreze neendudumo ezikhatshwa zizantyalantyala zemvula. Uhamba ngokungxama, ubhuduzela, ufuna indawo enekhusi. Kuthi kusenjalo, ubone isakhiwo esithile onokufihla kuso intloko apho ecaleni kwendlela. Esi sakhiwo sibonakala somelele, somile, kwaye sikhuselekile. Ngokwenene uyayixabisa indawo ekhuseleke ngolo hlobo!
2 Siphila kumaxesha anezaqhwithi. Iimeko zehlabathi ziya zisiba mbi ngakumbi nangakumbi. Kodwa kukho indawo esinokusabela kuyo ukuze sikhuseleke engozini. Yiyiphi loo ndawo? IBhayibhile ithi: “Ndiza kuthi kuYehova: ‘Uyindawo yam yokusabela negwiba lam, Thixo wam, endiza kukholosa ngaye.’”—INdumiso 91:2.
3. Sinokumenza njani uYehova abe likhusi lethu?
3 Khawufan’ ucinge! UYehova, uMdali noMongami wendalo iphela, unokuba yindawo yethu yokusabela. Unako ukusikhusela, kuba unamandla ngaphezu kwakhe nabani na okanye nantoni na enokuba yingozi kuthi. Kwanokuba sinokwenzakala, uYehova unako ukuwulungisa loo monakalo. Sinokumenza njani uYehova abe likhusi lethu? Simele sithembele kuye. Ngaphezu koko, iLizwi likaThixo lisibongoza lisithi: “Zigcineni kuthando lukaThixo.” (Yude 21) Ewe simele sizigcine eluthandweni lukaThixo, ngokuthi siqhubeke simthanda uBawo wethu wasezulwini. Ngaloo ndlela sinokuqiniseka ukuba uya kuhlala elikhusi lethu. Kodwa sinokuluhlakulela njani olo thando?
LUQONDE UTHANDO LUKATHIXO UZE NAWE UMTHANDE
4, 5. Ziziphi ezinye zeendlela uYehova abonise ngazo ukusithanda kwakhe?
4 Ukuze siqhubeke simthanda uThixo, simele siyiqonde indlela asithanda ngayo. IBhayibhile iyayichaza indlela asithanda ngayo, njengoko sifundile kwizahluko ezingaphambilana zale ncwadi. Sifundile ukuba uMdali, onguYehova, usinike umhlaba njengekhaya lethu elithandekayo. Uwuzalise ngentabalala yokutya namanzi, ubutyebi obufumaneka kwizimbiwa zomhlaba, iintlobo ngeentlobo zezilwanyana, kwanobuhle bemvelo. NjengoMbhali weBhayibhile, uThixo uye wasichazela ngegama lakhe nangeempawu zakhe. Ngaphezu koko, iLizwi lakhe lichaza ukuba uye wathumela emhlabeni uNyana wakhe amthandayo, ukuze eve ubunzima aze asifele. (Yohane 3:16) Yaye sithetha ukuthini kuthi eso sipho? Sisinika ithemba lekamva elimangalisayo.
5 Ikamva lethu likwaxhomekeke nakwenye into ayenzileyo uThixo. Uye wamisela uBukumkani ngoMesiya, okanye urhulumente wasezulwini. Lo rhulumente uza kuphelisa bonke ubunzima esibuvayo aze enze lo mhlaba ube yiparadesi. Khawucinge nje ngako oko! Kuthetha ukuba sinokuphila eluxolweni naselonwabeni ngonaphakade. (INdumiso 37:29) Okwangoku, uThixo usibonise indlela efanelekileyo esinokubuphila ngayo ubomi bethu. Usinike nesipho somthandazo, osivulela ithuba lokuthetha naye nanini na. Ezi zezimbalwa nje zeendlela uYehova abonise ngazo indlela aluthanda ngayo uluntu kuquka nawe.
6. Usenokusabela njani kwindlela uYehova akuthanda ngayo?
6 Umbuzo obalulekileyo ofanele uzibuze wona uthi: Ndimele ndisabele njani kuthando lukaYehova? Abaninzi bebeya kuthi, “Kucacile ukuba, nam ndimele ndimthande uYehova.” Ngaba nawe uvakalelwa ngaloo ndlela? UYesu wachaza ukuba owona myalelo mkhulu kunayo yonke uthi: “Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.” (Mateyu 22:37) Ngokuqinisekileyo unezizathu ezininzi zokumthanda uYehova uThixo. Kodwa ngaba ukuvakalelwa nje kukuba umthanda ngentliziyo, ngomphefumlo, nangengqondo yakho iphela uYehova kwanele?
7. Ngaba ukuthanda uThixo kubandakanya okungakumbi kunemvakalelo nje kuphela? Cacisa.
7 IBhayibhile ibonisa ukuba ukuthanda uThixo kubandakanya okungakumbi lee kunemvakalelo nje kuphela. Nangona ukuba nemvakalelo yothando ngoYehova kubalulekile, kodwa eneneni imvakalelo enjalo isisiqalo nje kuphela sothando lokwenene. Ngokomzekelo, imbewu yeapile ibalulekile ukuze kuvele umthi wama-apile oneziqhamo. Kodwa, ukuba ufuna iapile, ngaba iya kukwanelisa into yokuba umntu akunike imbewu yeapile? Ngokuqinisekileyo akunjalo! Ngokufanayo, ukuba nemvakalelo yothando ngoYehova uThixo kusisiqalo nje kuphela. IBhayibhile ithi: “Ukumthanda uThixo kuko ukuthi, siyigcine imiyalelo yakhe; kwaye ayinzima imiyalelo yakhe.” (1 Yohane 5:3) Ukuze lube lolokwenene, uthando ngoThixo lumele luvelise iziqhamo ezihle. Lumele luboniswe ngezenzo.—Mateyu 7:16-20.
8, 9. Sinokulubonisa njani uthando noxabiso lwethu ngoThixo?
8 Sibonisa ukumthanda kwethu uThixo ngokuthi sithobele imiyalelo nemigaqo yakhe. Akunzima ukwenza oko. Kunokuba ibe luxanduva, imithetho kaYehova yenzelwe ukusinceda ukuba sonwabe ebomini. (Isaya 48:17, 18) Xa siphila ngokuvisisana nokhokelo lukaYehova, simbonisa ukuba sikuxabisa ngokwenene konke oko asenzele kona. Ngelishwa, bambalwa gqitha namhlanje abantu abalubonisayo uxabiso olunjalo. Asifuni kuba ngabantu abangenaluxabiso, njengabanye abantu ababephila ngexesha uYesu wayesemhlabeni. UYesu waphilisa abantu abalishumi ababeneqhenqa, kodwa mnye kuphela owabuyayo ukuza kumbulela. (Luka 17:12-17) Ngokuqinisekileyo sifuna ukufana naloo mntu mnye wayenombulelo, kungekhona abasithoba ababengenambulelo!
9 Ngoko yiyiphi imiyalelo kaYehova esimele siyithobele? Siye saxubusha eliqela kule ncwadi, kodwa makhe sihlolisise kwakhona embalwa yayo. Oku kubalulekile, kuba ukuthobela imiyalelo kaThixo kuya kusinceda siqhubeke simthanda.
QHUBEKA USONDELA KUYEHOVA
10. Chaza isizathu sokuba kubalulekile ukuqhubeka singenisa ulwazi ngoYehova uThixo.
10 Ukufunda ngoYehova kulinyathelo elibalulekileyo lokusondela kuye. Kumele kube yinto eqhubekayo nengenasiphelo. Ukuba uhleli phandle ngobusuku obubanda gqitha, wothe umlilo, ngaba uya kuwuyeka ucime? Akunjalo. Uya kuqhubeka ufaka iinkuni ukuze umlilo uhlale uvutha. Impilo yakho ixhomekeke kuwo! Njengoko iinkuni zivuthisa umlilo, ngoko “ukumazi uThixo” kulugcina luqinile uthando lwethu ngaye.—IMizekeliso 2:1-5.
Njengomlilo, uthando lwakho ngoYehova lumele lubaselwe ukuze luhlale luvutha
11. Yaba nawuphi umphumo imfundiso kaYesu kubalandeli bakhe?
11 UYesu wayefuna ukuba abalandeli bakhe balugcine luvutha uthando lwabo ngoYehova nangeLizwi Lakhe elixabisekileyo lenyaniso. Emva kokuvuswa kwakhe, uYesu wafundisa abafundi bakhe ababini ngeziprofeto ezithile ezikwiZibhalo zesiHebhere ezazibhekisela kuye. Waba yintoni umphumo woko? Kamva bathi: “Bezingavuthi na iintliziyo zethu njengoko ebethetha nathi endleleni, njengoko ebesivulela ngokupheleleyo iZibhalo?”—Luka 24:32.
12, 13. (a) Kuye kwenzeka ntoni kuthando ababekade benalo abantu abaninzi namhlanje ngoThixo nangeBhayibhile? (b) Sinokuluthintela njani uthando lwethu ukuba lungapholi?
12 Xa wawuqala ukuva ngoko iBhayibhile ikufundisayo ngokwenene, ngaba intliziyo yakho yayingavuthi luvuyo, nenzondelelo, nothando ngoThixo? Ngokuqinisekileyo kunjalo. Abaninzi baye bavakalelwa ngendlela efanayo. Ngoku ucelomngeni kukulugcina luvutha olo thando nokulwenza luqhubeke lukhula. Asifuni kuxelisa ihlabathi lanamhlanje. UYesu wathi: “Luya kuphola uthando lwabaninzi.” (Mateyu 24:12) Unokuluthintela njani ukuba lungapholi uthando onalo ngoYehova nangenyaniso yeBhayibhile?
13 Qhubeka ungenisa ulwazi ngoYehova uThixo nangoYesu Kristu. (Yohane 17:3) Cingisisa nzulu ngoko ukufunda eLizwini likaThixo, uze uzibuze ukuba: ‘Kundifundisa ntoni oku ngoYehova uThixo? Kundinika siphi isizathu esingakumbi sokumthanda ngentliziyo, ngengqondo, nangomphefumlo wam uphela?’ (1 Timoti 4:15) Ukucamngca okunjalo kuya kulugcina luvutha uthando lwakho ngoYehova.
14. Umthandazo unokulugcina njani luvutha uthando lwethu ngoYehova?
14 Enye indlela onokulugcina ngayo luvutha uthando lwakho ngoYehova kukuthandaza rhoqo. (1 Tesalonika 5:17) KwiSahluko 17 sale ncwadi, sifunde ukuba umthandazo sisipho esixabisekileyo esivela kuThixo. Kanye njengokuba ubuhlobo babantu buqina xa bencokola rhoqo nangokukhululekileyo, ngoko nobuhlobo bethu noYehova buya kuqina xa sithandaza rhoqo kuye. Kubalulekile ukuba imithandazo yethu ingabi kukuphindaphindwa nje okungenantsingiselo nokungenamvakalelo yokwenene. Simele sithethe noYehova ngendlela umntwana athetha ngayo noyise amthandayo. Simele sithethe ngentlonelo, kodwa ngokukhululekileyo, ngokunyanisekileyo, nangokusuk’ entliziyweni. (INdumiso 62:8) Ewe, ukuthandaza ngokusuk’ entliziyweni, nokuba nesifundo seBhayibhile sobuqu, ziinkalo ezibalulekileyo zonqulo lwethu, yaye kuyasinceda ukuba siqhubeke simthanda uThixo.
15, 16. Kutheni simele siwugqale njengelungelo nobuncwane umsebenzi wokushumayela ngoBukumkani?
15 Ukuba nesifundo seBhayibhile sobuqu kunye nokuthandaza, ziindlela zokunqula zangasese. Kodwa, ngoku makhe sihlolisise indlela yokunqula yasesidlangalaleni: ukuthetha nabanye ngeenkolelo zethu. Ngaba sowukhe wabelana nabanye ngenyaniso eseBhayibhileni? Ukuba kunjalo, uya kube unandiphe ilungelo elimangalisa ngokwenene. (Luka 1:74) Xa sisabelana nabanye ngenyaniso esiyifundileyo ngoYehova uThixo, siphumeza esona sabelo sibalulekileyo esinikwe onke amaKristu okwenyaniso—esokushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo.—Mateyu 24:14; 28:19, 20.
16 Umpostile uPawulos wayebugqala njengento exabisekileyo ubulungiseleli bakhe, wada wabubiza ngokuba bubuncwane. (2 Korinte 4:7) Ukuthetha nabantu ngoYehova uThixo nangeenjongo zakhe, ngowona msebenzi ubalulekileyo unokuwenza. Lo msebenzi uwenzela eyona Nkosi iphakamileyo, yaye uya kukuzisela ezona ngenelo zibalaseleyo. Ngokuba nenxaxheba kulo msebenzi, unceda abantu abantliziyo zinyanisekileyo ukuba basondele kuBawo wethu wasezulwini baze baqalise ukuhamba endleleni esa ebomini obungunaphakade! Nguwuphi ke omnye umsebenzi obunokwanelisa ngaphezu kwalowo? Ngaphezu koko, ukushumayela ngoYehova nangeLizwi lakhe kukhulisa ukholo lwakho kuze kuqinise nothando lwakho ngaye. Yaye uYehova uyayixabisa imizamo yakho. (Hebhere 6:10) Ukuhlala uzixakekise ngokwenza lo msebenzi kuya kukunceda ukuba uqhubeke umthanda uThixo.—1 Korinte 15:58.
17. Kutheni ukushumayela kwamaKristu kungxamisekile namhlanje?
17 Kubalulekile ukukhumbula ukuba umsebenzi wokushumayela ngoBukumkani ungxamisekile. IBhayibhile ithi: “Lishumayele ilizwi ngokungxamisekileyo.” (2 Timoti 4:2) Kutheni kungxamiseke kangaka nje oku namhlanje? ILizwi likaThixo liyasichazela, lisithi: “Imini enkulu kaYehova ikufuphi. Ikufuphi, yaye ikhawuleza kakhulu.” (Zefaniya 1:14) Ngoku lisondele kakhulu ixesha lokuba uYehova aphelise yonke le nkqubo yezinto. Abantu bamele balunyukiswe! Bamele bazi ukuba ngoku lixesha lokuba bakhethe uYehova njengoMlawuli wabo. Isiphelo ‘asiyi kufika emva kwexesha.’—Habhakuki 2:3.
18. Kutheni simele simnqule esidlangalaleni uYehova kunye namanye amaKristu okwenyaniso?
18 UYehova ufuna simnqule esidlangalaleni kunye namanye amaKristu okwenyaniso. Kungenxa yoko le nto iLizwi lakhe lisithi: “Masinyamekelane, sivuselelane eluthandweni nasemisebenzini emihle, singakutyesheli ukuhlanganisana kwethu ndawonye, njengoko kulisiko labathile ukwenjenjalo, kodwa masikhuthazane, ngokungakumbi njengoko nibona ukuba imini iyasondela.” (Hebhere 10:24, 25) Xa sihlanganisana nabanye esikholwa nabo kwiintlanganiso zamaKristu, siba nethuba elihle lokudumisa nokunqula uThixo wethu esimthandayo. Kanti elo ikwalithuba lokuba sikhuthazane.
19. Sinokulwenza njani luqine ngakumbi uthando kwibandla lamaKristu?
19 Njengoko sinxulumana nabanye abanquli bakaYehova, luqina ngakumbi uthando kunye nobuhlobo ebandleni. Kubalulekile ukuba sijonge iimpawu ezintle kwabanye, njengokuba noYehova ejonga iimpawu ezintle kuthi. Musa ukulindela ukuba abo ukhonza nabo benze izinto ngendlela egqibeleleyo. Khumbula ukuba umgangatho wabo wokomoya awulingani, yaye sonke siyazenza iimpazamo. (Kolose 3:13) Zimisele ukuba nobuhlobo obuqinileyo kunye nabo bamthanda ngokwenene uYehova, ngaloo ndlela uya kukhula ngokomoya. Ngokuqinisekileyo, ukunqula uYehova kunye nabazalwana noodadewenu bokomoya kuya kukunceda ukuba uqhubeke umthanda uThixo. UYehova ubavuza njani abo bamthandayo nabamnqula ngokuthembekileyo?
ZABALAZELA UKUFUMANA “UBOMI BENENE”
20, 21. Buyintoni “ubomi benene,” yaye kutheni bulithemba elimangalisayo?
20 UYehova ubavuza ngokubanika ubomi abakhonzi bakhe abathembekileyo, kodwa uhlobo olunjani lobomi? Kaloku, ngaba ungathi bubomi bokwenene obu sibuphilayo ngoku? Inkoliso yabantu ibiya kuphendula ngokuthi ewe kunjalo, kuba siyaphefumla, siyatya, siyasela. Yaye xa sonwabile sisenokude sithi, “Ngoku ndibunandipha ngokwenene ubomi!” Kodwa iBhayibhile ibonisa ukuba akakho namhlanje umntu obunandipha ngokwenene ubomi.
UYehova ufuna ukuba unandiphe “ubomi benene.” Ngaba uza kubunandipha?
21 ILizwi likaThixo lisibongoza ukuba sizabalazele ukufumana “ubomi benene.” (1 Timoti 6:19) La mazwi abonisa ukuba “ubomi benene” yinto esinethemba lokuyifumana kwixesha elizayo. Ewe, xa sifezekile, siya kubunandipha ngokupheleleyo ubomi, kuba siya kuphila ngendlela awayefuna siphile ngayo uThixo ekuqaleni. Xa siphila kwiparadesi yasemhlabeni, apho kuya kube kukho impilo, uxolo, nolonwabo olugqibeleleyo, siya kuqala ke ukunandipha “ubomi benene”—ubomi obungunaphakade. (1 Timoti 6:12) Lithemba elimangalisa ngokwenene elo, akunjalo?
22. Unokubuzuza njani “ubomi benene”?
22 Sinokubuzuza njani “ubomi benene”? Impendulo siyifumana kumazwi kaPawulos, xa wayebongoza amaKristu ukuba “enze okulungileyo” yaye “atyebe emisebenzini emihle.” (1 Timoti 6:18) Ngoko kucacile ukuba, ubukhulu becala kuxhomekeke kwindlela esiyisebenzisa ngayo inyaniso esiyifunde eBhayibhileni. Kodwa ngaba uPawulos wayethetha ukuba siya kukufanelekela ukuzuza “ubomi benene” ngokwenza kwethu imisebenzi emihle? Akunjalo, kuba enyanisweni elo themba limangalisayo lixhomekeke ekufumaneni kwethu ‘ububele obungasifanelanga’ bukaThixo. (Roma 5:15) Kodwa ke, uYehova uyakuvuyela ukubavuza abo bamkhonza ngokuthembekileyo. Ufuna ukukubona uphila “ubomi benene.” Abo baqhubeka bemthanda uThixo, bagcinelwe uhlobo olunjalo lobomi, ubomi obungunaphakade obuzaliswe luxolo nolonwabo.
23. Kutheni kubalulekile ukuqhubeka simthanda uThixo?
23 Ngamnye wethu ufanele azibuze ukuba, ‘Ngaba ndimnqula uThixo ngendlela athi eBhayibhileni ufuna simnqule ngayo?’ Ukuba siyaqinisekisa imihla ngemihla ukuba siyakwenza oko, sakuba sisendleleni echanileyo. Ngoko sinokuqiniseka ukuba uYehova ulikhusi lethu. Uya kubakhusela abantu bakhe abathembekileyo ebudeni bale mihla yokugqibela yale nkqubo indala yezinto ezaliswe ziinkathazo. Kwakhona uYehova uya kusingenisa kwinkqubo entsha nezukileyo yezinto ekufuphi ngoku. Kuya kuchulumancisa ngokwenene ukubona oko kusenzeka! Yaye siya kuvuya gqitha kuba siye senza ukhetho oluchanileyo ebudeni bale mihla yokugqibela! Ukuba nawe wenza ukhetho olunjalo ngoku, uya kunandipha “ubomi benene,” ubomi uYehova uThixo afuna sibuphile ngonaphakade!
Sibonisa ukuba simthanda ngokwenene uThixo ngokuthi sithobele imiyalelo nemigaqo yakhe.—1 Yohane 5:3.
Ukufundisisa iLizwi likaThixo, ukuthandaza kuye ngokusuk’ entliziyweni, ukufundisa abanye ngaye, nokumnqula kwiintlanganiso zamaKristu kuya kusinceda ukuba siqhubeke simthanda.—Mateyu 24:14; 28:19, 20; Yohane 17:3; 1 Tesalonika 5:17; Hebhere 10:24, 25.
Abo baqhubeka bemthanda uThixo banethemba lokunandipha “ubomi benene.”—1 Timoti 6:12, 19; Yude 21.
Qhubeka Umthanda UThixo (Inxalenye 1)
Qhubeka Umthanda UThixo (Inxalenye 2)